Maxay tahay arrinta xasaasiga ah ee shaqada looga eryay gabadhan gacanyaraha u ahayd Trump? - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaMaxay tahay arrinta xasaasiga ah ee shaqada looga eryay gabadhan gacanyaraha u ahayd Trump?
Maxay tahay arrinta xasaasiga ah ee shaqada looga eryay gabadhan gacanyaraha u ahayd Trump?
Washington (JigjigaOnline) – Haweeneydii gacan yaraha khaaska ah u ahayd madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu khasbay inay shaqada iska casisho kadib markii, sida la sheegay, ay qaab qarsoodi ah ku bixisay xog xasaasi ah oo ku saabsan qoyska madaxweynaha.
Madeleine Westerhoutm oo 29 jir ah ayaa shaqada laga eryay Khamiistii, ka dib markii uu Mr Trump ogaaday inay sirtiisa khaaska ah la wadaagtay wariyeyaasha, horaantii bishan.
Macluumaadka ay gabadhan bixisay ayaa la sheegay inay ku saabsanaayeen kulan casho ah oo uu madaxweynaha sameeyay.
Warbaahinta CBS ayaa tabisay in Madeleine marka ay xogtaas bixineysay ay khamri cabeysay. Waxay ka warrantay sida ay suurtagal ugu ahayd inay madaxweynaha xilli walba la kulanto markii uu fasaxa ku joogay gobolka New Jersey.
Ms Westerhout ayaa gacanyaraha madaxweyne Trump ahayd tan iy maalintii ugu horreysay ee uu madaxweynaha noqday.
Mas’uuliyiinta Aqalka Cad oo wax laga weydiiyay arrintan ayaa ka qaabsaday inay faahfaahin bixiyaan.
Wargeyska New York Times, oo markii ugu horreysay tabiyay sheekada ku saabsan in shaqada laga eryay gacanyarihii Trump, ayaa sheegay in haweeneydaas laga mamnuucay Aqalka Cad wixii ka dambeeya maanta oo Jimce ah.
Gabadhan, oo warbaahinta Mareykanka ay ku qeexeen inay ahayd qofka ilaaliya albaabka xafiiska madaxweyne Trump ayaa xafiiskeeda ku lahayd kasoo horjeedka xafiiska madaxweynaha.
Waxaa lagu qoomay inay warfidiyeenka la wadaagtay hadalladii la isku weydaarsaday fadhi casho ah oo aan la oggoleyn inay wariyeyaasha wax ka ogaadaan.
Ilo wareedyo ayaa CBS u sheegay in iyadoo khamri cabeysa ay dibadda soo dhigtay xog khaas ah oo ku saabsan qoyska madaxweynaha. Waxaa lasoo tabiyay inay sidoo kale garab siisay suxufiyiin doonayay inay la kulmaan madaxweynaha.
Wali ma cadda sida uu madaxweyne Trump ku ogaaday waxa ay sameysay gacanyarihiisa.
Saraakiil dhowr ah oo ka tirsan Aqalka Cad ayaa horay u sheegay inay ka shakisan yihiin in haweeneydan aysan si buuxda daacad ugu ahayn madaxweynaha.
Mid ka mid ah saraakiishii hore ee Aqalka Cad ayaa warbaahinta CBS ku yiri: “Ilaa maalintii ugu horreysayba waxay ahayd jaajuus”.
Ms Westerhout ayaa horay ula shaqeyn jirtay guddiga qaran ee xisbiga Jamhuuriga.
Waa tee Caasimadda cabsida la dareemayo marka la dhex socdo?
Shirkadda Google Oo Ogaatay In Weerrarro Aan Kala Go’ Lahayn Oo Sannado Socday Lagu Qaaday Shirkadda iPhone